Rasuul iyo NabiEdit
Waxaa jira dad badan oo Alle (s.w) soo diray kuwaasi oo ah Rasuul, Nebi ama labadaba. Tusaale ahaan, Nebi Muxamed
waa Ras'uul iyo Nebi, halka Nebi Yuusuf, tusaale ahaan, yahay nabi oo kali ah. Dhinaca kale, Nebi Daa'uud wuxuu ahaa nin Rasuul iyo Nebi ah oo lagu soo dejiyay kitaabka Sabuur, halka wiilkiisa Nebi Suleymaan ahaa nebi oo kali ah. Inta u badan Rasuushu waxaa lagu soo dejiyay kitaab ay ku xusan tahay shariicada iyo qawaaniinta bulshada lagu maamulayo, halka Nebiyadu ay dadka barayeen kitaabta lagu soo dejiyay Rasuusha ka horeeysay.
5. Nebi Muxamed
oo Alle (s.w) ku soo dejiyay kitaabka Quraanka ee lagu magacaabo Al-Furqaan. Nebi Muxamed
waa Rasuul iyo Nebi loo soo diray dhamaan shacabka, bulshooyink, qabiilada iyo dadka ku nool caalamka, taasi oo ah mid ka duwan Nebiyadii iyo Rusuushii ka horeeysay ee Alle soo diray.
Jadwalka Nabiyada Ku Xusan QuraankaEdit
Nebiya Ilaahay (s.w,t) ku sheegay kitaabka Quraanka kariimka ah ee lagu soo dejiayay Nebi Muxamed
waa 25 Nabi kuwaasi oo kala ah:
Shaxda Nabiyada iyo KutubtoodaEdit
↑ "Kitaabka Quraanka kariimka ah ee diinta Islaamka waxaa ku xusan tiro 25 Nabi iyo Rasuul kuwaasi oo ugu horeeyo aabaheen Nebi Aadam (c.s) uguna dambeeyo nabiga lagu soo khatimay anbiyada iyo rususha waa Nebi Muxamed
↑ "Nebi Muxamed
waa Ras'uul iyo Nebi"
Last edited on 21 Febraayo 2017, at 13:21